Ukutshala i-apricot nokunakekelwa | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Ukutshala i-apricot nokunakekelwa
Ukutshala i-apricot nokukhathalela - isimangaliso sehlobo elimnandi
Akunakwenzeka ukuthola abantu abangazange badle futhi bengathandi izithelo ze-apricot. Lesi yisithelo esihlwabusayo kakhulu esiletha injabulo kanye nezinzuzo zezempilo kuphela. Ukuze uthole umuthi wesithelo we-apricot engadini yakho kusho ukuzitholela izithelo ezihlwabusayo kakhulu ehlobo, i-jam eyingqayizivele, i-compotes kanye ne-jam ebusika isikhathi eside.
I-apricot: ukukhetha kwezinhlobo zasebusika-eziqinile esifundeni saseMoscow
Kucatshangwa ukuthi i-apricot iyisiko eseningizimu. Kodwa-ke, abalimi sebevele bathole izindlela zokutshala lesi sihlahla esihle ezindaweni ezipholile. Isifunda saseMoscow - indawo ibanda kakhulu, futhi amaqhwa lapha angakwazi ukufinyelela -30 ° C. Ngenxa yezimo ezinjalo zezulu, izinhlobo ezinhle kakhulu zama-apricot esifundeni saseMoscow ziyoba izinhlobo zasebusika ezinobusika-obuqinile.
I-Apricot "Prince Enkulu": ukutshala nokukhathalela engadini
I-apricot "i-Black Prince" ayijwayele kubo bonke abalimi, kodwa isheshe ithole ukuthandwa. Izinhlobonhlobo - i-hybrid ye-apricot, i-cherry plum ne-plum, ngokusho kwabalimi, kubonakala ngenxa yokuvota okungahleliwe kwe-apricot cherry plum. Kamuva, kwanconywa kancane ngokungeza izici zobuningi beplamu.
Izici ukunakekelwa kwezinhlobo zama-apricot ezimnyama "I-velvet emnyama"
Yini nje engasungula abalimi ukuba bamangaze abantu ngempumelelo yabo. Isibonelo, mina nowe sijwayele ama-apricot aphuzi ajwayelekile, kodwa kuvela ukuthi lokhu kude nokuhluka kombala wabo kuphela. Ngakho-ke, siyakunaka isici se-apricot "I-velvet emnyama", incazelo eqinisekile ukukumangaza.
I-apricot emnyama: ukutshala nokunakekela "i-black Kuban"
Bobabili abaqalayo kanye nabalimi abanolwazi abanolwazi banesifiso semvelo sokukhula into engavamile engadini yabo. Lokhu kungacatshangwa njenge-apricot emnyama, enegama layo ngenxa yombala ongavamile wezithelo. Izinhlobonhlobo ze-Apricot "Kuban black": incazelo Ngaphambi kokunquma ukukhula ezinhlobonhlobo ze-apricot omnyama "Kuban black", kufanele ufunde incazelo yayo ukuze uqonde ukuthi yiziphi izimo ezizodinga ukuhlelwa kulesi sitshalo, indlela yokunakekela kahle nokuthi yini yokutshala.